Nanendry talen'ny fizahantany vaovao ny Birao fizahan-tany Anguilla
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Anguilla Travel News » Nanendry talen'ny fizahantany vaovao ny Birao fizahan-tany Anguilla
Stacey Liburd dia nanendry ny talen'ny fizahan-tany vaovao an'i Anguilla
Ny Hon. Ny Minisitry ny fizahantany, Andriamatoa Hayden Hughes, dia nanambara androany ny fanendrena an-dRamatoa Stacey Liburd ho amin'ny talen'ny fizahantany, nanomboka ny 4 Janoary 2021.
"Niara-nametraka Birao matanjaka be izahay ao amin'ny ATB," hoy ny minisitra Hughes. "Ny birao mpizahatany Anguilla (ATB) dia hohatanjahina amin'ity fanendrena nataoko ity taorian'ny nandinihako tamim-pitandremana ireo mpiara-miasa amiko momba ny fizahantany ary nifanaraka tamin'ny lalàna ATB. Ramatoa Liburd dia manana ny fahaizana manampy amin'ny fitetezana ireo asa isan'andro mandritra ireo fotoana tsy mbola nisy toy izany ary manana ny fahatokisantsika sy ny fanohananay izahay eo am-pandrosoana mialoha, "hoy hatrany ny minisitra.
"Stacey Liburd no mpilatsaka hofidina mety hitrangan'ity toerana manan-danja ity," hoy Andriamatoa Kenroy Herbert, filohan'ny Birao Mpizahatany Anguilla. “Mpivarotra fizahan-tany mamorona fizahan-tany izy ary mpitantana mifantoka amin'ny valiny manana fahaizana voaporofo fa afaka mampivelatra sy manatanteraka fampielezan-kevitra amin'ny marketing sy hetsika ara-barotra izay manome valiny. Matoky izahay amin'ny fahaizany mitarika sy ny fahaizany mitarika ny Birao Mpizahatany Anguilla sy ny indostrianay amin'ny alàlan'ny fanarenana anay aorian'ny post-Covid vanim-potoana. ”
Talohan'ny nanendrena azy, Ramatoa Liburd dia mpikambana tao amin'ny filankevi-pitantanana ATB izay nitantanany ny komity marketing. Tonga eo amin'ny toerany izy miaraka amin'ny fivelarana ara-barotra, varotra ary traikefa amin'ny fizahan-tany amin'ny fizahan-tany, izay nisolo tena ny ampahan'ny faran'ny fampiantranoana sy villa miavaka indrindra an'i Anguilla. Izy dia niasa tamin'ny Sales and Marketing Manager ho an'ny Quintessence Hotel, trano Relais sy Château, Santosha Estate, Long Bay Villas, Zemi Beach House ary ny Tranquility Beach Resort Anguilla vaovao, namolavola fanentanana momba ny varotra sy dokam-barotra ary programa momba ny varotra hampitomboana ny fahafantarana ny marika ary koa ny mitondra fiara any amin'ny resort. Amin'ny maha-talen'ny fampiroboroboana ny asa aman-draharaha ho an'ny Calypso Charters dia nifantoka tamin'ny fampidirana fandaharanasa momba ny fandraisana mpiasa sy fampiofanana betsaka ho an'ny mpiasa izy, ary koa ny fanitarana ny kaonty amin'ny trano fandraisam-bahiny, villa ary mpandraharaha fizahan-tany.
"Voninahitra ho ahy ny nanankinan'ny Birao ahy izany andraikitra lehibe izany," hoy Ramatoa Liburd. “Mpino mafana fo amin'ny vokatra fizahan-tany miavaka an'i Anguilla aho ary manantena ny hiara-miasa akaiky amin'ireo mpiara-miasa amiko ao amin'ny Birao, ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny fizahan-tany, ary miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay amin'ny indostria hamerina ny anjaran'ny tsenanay, hanangana ary hamerina ny tanjonay ho ny be indrindra fanandramana fialan-tsasatra mahafinaritra any Karaiba. ”
Ramatoa Liburd dia manana mari-pahaizana bakalorea (lalàna) avy amin'ny University University of New York - John Jay College. Izy koa dia manana mari-pankasitrahana momba ny fandraisam-bahiny sy fitantanana fizahan-tany avy amin'ny Florida Atlantic University ary nahazo ny mari-pahaizana Tale Chartered (C.Dir.) Avy amin'ny The Caribbean Governance Training Institute.
Ny Minisitry ny fizahantany Belize dia namoaka fanambarana tamin'ny fandalovan'i Gordon 'Butch' Stewart
Ny FAA sy ny NASA dia manamafy ny fiaraha-miasa amin'ny hetsika eny amin'ny habakabaka